Ireo Fitahiana avy amin’ny Fanasan’ny Tompo - Don R. Clarke
Nataon’ny Loholona Don R. Clarke
Hotahiana isika raha mahatsapa fankasitrahana noho ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy, raha manavao ny fanekempihavanana izay nataontsika tamin’ny batisa, raha mahatsapa famelan-keloka, ary mandray fitarihana avy amin’ny Fanahy Masina.
Tao Rexburg, Idaho, no nahalehibe ahy, toerana izay nandraisako fitarihana sy fampianarana avy amin’ny fianakaviana iray mahafinaritra, sy ireo namana, mpampianatra ary mpitarika. Misy traikefa miavaka eo amin’ny fiainantsika rehetra izay miantraika amin’ny fanahintsika amin’ny fomba mampihetsi-po ary manova mandrakizay ny fiainantsika. Nitranga teo amin’ny androm-pahatanorako ny toy izany. Nanova ny fiainako izany zava-nitranga izany.
Nazoto tato am-piangonana foana aho hatrizay ary nandalo ireo dingana ao amin’ny Fisoronana Aharôna. Fony aho mbola zatovo dia nangataka ahy ny Rahalahy Jacob, izay mpampianatra ahy, hanoratra eo amin’ny baoritra kely ny eritreritra niserana tao an-tsaik